असारे विकास : ४ दिनमा ६ अर्ब पुँजीगत खर्च ! | mulkhabar.com
असारे विकास : ४ दिनमा ६ अर्ब पुँजीगत खर्च !
June 3, 2019 | 7:13 am 36 Hits
काठमाडौं , २० जेठ-
आर्थिक वर्षको अन्तिममा सरकारले पुँजीगत खर्च ह्वात्तै बढाएको छ। पछिल्ला ४ दिनमा भएको खर्चले असारे विकास गर्ने प्रवृत्तिको निरन्तरता दिने संकेत देखाएको छ।
पछिल्ला ४ दिनमै ६ अर्ब ६४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो खर्च चालु आवका सुरु दुई महिनामा भए बराबर हो। चालु आव सकिन अब डेढ महिना पनि बाँकी छैन।
महालेखा नियन्त्रकका अनुसार चालु आवको पहिलो दुई महिना (साउन– भदौ) मा ६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो। जेठ लागे लगत्तै १५ दिनमा ६ अर्ब १५ करोड १५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो। तर, खर्चको आकार बढ्दा पनि आइतबारसम्म पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक छ।
कुल विनियोजन गरिएको ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये एक खर्ब ४१ अर्ब ६६ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो ४४.९१ प्रतिशत मात्रै हो।
अर्थ मन्त्रालयले मध्यावधि समीक्षामार्फत विनियोजित बजेटको ८४.५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्ने नयाँ लक्ष्य लिएको थियो। यो लक्ष्य भेट्न अब ४४ दिन बाँकी छ। यसका लागि दैनिक ६ अर्ब दुई करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ। यसरी नै खर्च भए पनि असारमा खर्च २० प्रतिशत नाघ्ने देखिएको छ।
२० प्रतिशतभन्दा बढी नाघेमा वित्तीय अनुशासनको बर्खिलाप हुने कानुनी व्यवस्था छ। वर्षान्तमा ठूलो मात्रामा बजेट निकासा र खर्च हुँदा अनियमितता बढेको सरोकारवाला बताउँछन्। विगतमा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा विनियोजित कुल बजेटको करिब आधा हिस्सासम्म बजेट निकासा हुने गरेका उदाहरण छन्। यसपालि पनि बिगतमा झैं निरन्तरता दिने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले विकास खर्चमा देखिएको समस्या न्यूनीकरणका लागि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ जेठमै बजेट ल्याउने अभ्यास थाले पनि त्यसबाट खासै अन्तर देखिएको छैन। संसद्बाट बजेट अनुमोदन हुन नै लामो समय लाग्दा बजेट खर्च हुन नसकेको भन्दै संविधानमा नै जेठ १५ मा बजेट ल्याउने प्रावधान राखिएको खबर अन्नपूर्ण पाेष्टमा छ ।
सुनको मुल्य घट्यो, कति पुग्यो लौ हेर्नुस् !
काठमाडौं, ३ असार । स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ । सोमबारको तुलनामा मंगलबार सुनको मूल्य एक सय रुपैयाँले घटेको…
कस्तो छ नेपालको आर्थिक अवस्था ? पुँजीगत खर्च भन्दा साधारण खर्च झण्डै तेब्बर
काठमाडौं, २० जेठ । नेपालको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट भर्खरै संसदमा प्रस्तुत भएको छ । आ।ब। २०७६र२०७७ को बजेट…
१५ खर्ब ३१ अर्बकाे बजेट अाउँदै : ३ खर्ब बढ्याे
बढ्याे नेपालकाे ऋण : एक जनाकाे भागमा ३३ हजार
२८ स्थानीय तहमा अझै पुग्न सकेनन् बैंक
राजश्व चुहावटलाई प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कारवाही गर्न सक्छ : अर्थमन्त्री
प्रि बजेटमाथीकाे छलफल, कसले के भने ?
गोंगबुमा एनआइसि एशीयाको नयाँ शाखा खुल्यो
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा भट्टराई : अबैध सम्पत्तिविरूद्व कडा कार्वाही थाल्दै
प्रदेश सरकारले पाए बजेटको सिलिङ, कसले कति पाए ? हेर्नुहोस
राजनीतिview all	संसद अवराेध गरेर प्रतिपक्षी दलले गलत गर्यो– माधव नेपाल
असल अभिभावक गुमायौं– सभामुख महरा (शोक वक्तव्यसहित)
८५ वर्षिय माेहनविक्रम फेरि महामन्त्री, ४५ वर्षदेखि उनकै नेतृत्वमा मसाल